Enda pane imwe kutsika vanofadza wako kuravira namabukira uye kuitawo zvakanaka zvokudya Tours mu Europe. Kana uri munhu farira Foodie, mukanwa mako, uyewo wako Instagram inosimbisa kuchaita kusvetuka nomufaro pamwe chii uchawana. Ehe saizvozvo, nzira yakanakisa yekushanyira gastronomic genius ane mukurumbira maguta muEurope ari nechitima. Here are our top of 7 Best Food Tours To Experience In Europe.
Kana ukaona muPrague, ita zvinotaurwa hipsters kuita uye kunakidzwa ndege doro uyewo zvokudya rwokuparidza. Unogona kunyange kutora nzvimbo ine doro nyanzvi. Vachafara kutora iwe uri Pivo (doro) Rwendo kufanana nezvimwe.
Vienna ndiye zvose runako, Zvisinei izvi kunyanya saka kana totaura vanofarira. It ane palpable nderechokwadi unofanira kutanga kushanya kune chaiwo Viennese kofi imba imwe uye. Kubva kofi imba, unogona kuita nzira yako yakakurumbira Naschmarket, bhurasho chiwanikwa ane zvakasiyana-siyana yeAustria unyanzvi kuti zvinosanganisira chizi uye vhiniga.
Unoda embed yedu Blog romukova “7 Best Food Tours To Experience In Europe ” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-tours-europe%2F ‎– (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)